Indaba yamadayinaso idala ukuphikisana okukhulu phakathi kwamaKrestu kuleminyaka endlulile kanye namanje emhlabeni, incazelo efanele ukuchaza kuGenesisi, kanye nokuthi sizothola kanjani ubufakazi obuphathekayo lapho sihlala khona.Kulabo abakholwa emhlabeni omdala bavumelana ukuthi zazi khona lezidalwa kodwa iBhayebheli alilobanga ngazo, ngokuba ngokuya kwezifundo ezidala amadayinaso afa eminyakeni eyisigidi edlulile (one million) ngaphambi kokudalwa komuntu wokuqala owahamba emhlabeni. Umuntu owabhala iBhayibheli akazange awabone amadayinaso.
Labo abakholelwa kuminyaka emisha yeBhayebheli bayavumelana ukuthi amadayinaso liyakhuluma ngawo, kodwa alisebenzisi dayinaso . Esikhundleni, basebenzisa igama lesi Hebheru elithi Tanniyani, ilihumushwa ngezindlela eziningi ngeBhayibheli lesiNgisi kwesinye isikhathi sithi sea monster okusho ukuthi amazimuzimu aselwandle, kwesinye isikhathi serpent inyoka endala . Kaningi siyihumusha ngokuthi udrago inyoka endala . Lama Tanniyani kubukeka kungathi lezinyoka zinesimo esikhulu. Lezizidalwa kubhalwe ngazo cishe kube ngamashumi amathathu eTastementeni elidala bezitholakala emhlabeni kanye nasemanzini.
cishe sonke esikhathi esidlulile sinendlela ethize yokufanisa imvelo ekhombisa izilwane ezinwambulukayo ezinkulu kakhulu.amaPetrogalifisi, nama arthifekhto, kanye nezilwane ezihlala phakathi kobumba sizithola eNingizimu yeMerika zikhomba noma zimela amadayinaso wamanje. Abakhanda amatshe eNingizimu yeMerika bathola amadoda akhwele amadiplodocus, - njenge silwane futhi okumangazayo, iBhere elisithombe esifana netriceratops , kanye ne pterodactyl, ne trannosaurus izidalwa ezinjalo. Izithombe zomdwebo wama Roma, amabhodwe eMayan, kanye nayo yonke imithangala yaseBhabheloni iyafakazela ukuphenduka komuntu ngokwemvelo yakhe, ngokwezomhlaba kukhona okumangazayo ngendlela emangalisayo ngalezidalwa. Izifundo ezimangalisayo njengezaka Marco Polo s 11 Isicebi sihlanganiswa nesimangaliso nencebo enkulu ezilwaneni. Ngaphezu kwalokho kwathasisela ulwazi lwezabantu, nezomlando nobufakazi bokuthi kukhona ubuphila phakathi kwabantu namadayinaso, kukhona ubufakazi obuphathekayo, njengezinyathelo zefossilized nezabantu kanye namadayinaso ezatholwa ezindaweni zaseNingizimu Melika kanye nasenkabeni ye Eshiya.
Siyafunda yini ngawo ezwini leNkosi